Qeybta 1: Waa maxay sababta ay u isticmaalaan m2ts Converter
Qeybta 2: Sida loo badalo m2ts?
Qaybta 3, Sidee si ay u gubaan m2ts in DVD?
Waxaa jira dhowr isticmaalka m2ts convertor oo dhan ee isticmaalka loo arki karin faa'iidooyinka convertor ee noocani. Waa in la ogaadaa in convertors in la heli karaa online tahay gobolka oo dhan ee tahay marka laga reebo wax yar oo ka mid ah iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in convertor ka m2ts waa in la isticmaalaa daryeelka aad u badan iyo taxadar marka ay timaado si aad dooranayso hal.
Waxaa jira tobanaan kun oo adeegyada internetka oo la hubiyo in qaabka m2ts aan la badaley oo kaliya laakiin tayada waxaa sidoo kale sii raagayaan habka ugu wanaagsan oo macquul aheyn in 90% ka mid ah adeegyada la midka ah ee la heli karo online. Mar user ay u baahan tahay in la hubiyo in convertor la doortay ee arrintan la xiriira waa in aanay noqon oo kaliya ciyaaryahanka ugu fiican, laakiin waa in sidoo kale la hubiyo in feature ugu fiican oo gundhig iyo mar faylka m2ts waxaa loo baddalaa ugu wanaagsan ee user la siiyay marka la eego oo tayo leh.
1. About tutorial
Tutorial Tani ayaa sidoo kale loo qoray si loo hubiyo in convertor ugu fiican ee aan la soo bandhigay oo keliya laakiin user sidoo kale helo geeddi-socodka la xiriira iyo sidoo kale si la isticmaalayo ciyaaryahanka uusan arrintan ka ah oo dhan. The Wondershare Video Convertor Ultimate waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican oo aad u hubiso in faylasha loo rogaa ka m2ts in kasta oo qaab kale oo hawadooda user. Barnaamijka waxaa la socon kara badisay 7/8 / XP iyo Vista iyo user Haddaba helo waayo-aragnimo ugu fiican. URL ee barnaamijka waa http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html iyo user inay hubiyaan in convertor la soo bixi xilliga tijaabada samayn kartaa oo kaliya si ay go'aan wax iibsiga la sameeyo arrintan la xiriira . Si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan in la siiyo dadka isticmaala ee arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in dhammaan sifooyinka iyo hannaanka in goor dambe la soo sheegnay doonaa waa in la dalbadaa habka ugu wanaagsan si codsiga ah geeddi-socodka ma aha dhibaato oo dhan. Ku beddelaan, hagaajinta iyo diinta marnaba si adag in arrintan la xiriira iyo user wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah marka la eego tayada aan khasaaraha ka mid ah xitaa 1px.
Haddii convertor ma aha ilaa sumaddii ka dibna waxa ma badalo doona faylasha si wanaagsan mana u heli doonaan wax soo saarka hab ugu fiican. Faa'iidada ugu weyn ama isticmaalka ee m2ts waa xaqiiqda ah in uu qaniinaa faylasha m2ts weyn qaabab kala duwan oo aan la hubiyo in tayada waxaa saameeya. Convertors waxa kale oo la hubiyo in la abuuro gurmad u files waaweyn ma aha heshiis weyn oo dhan oo dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in files yihiin ciriiri si weyn u kordhin.
2. Shuruudaha iyo taageeray OS
Waxaa jira shuruudo gaar ah in user a waa in oofiyo si loo hubiyo in hannaanka horumarka habka ugu fiican. Kuwani waa:
• file M2ts in loo baahan yahay diinta
• The Wondershare video convertor kama dambaysta ah
The Wondershare video convertor kama dambaysta ah uu leeyahay mid ka mid ah qaababka ugu fiican in barnaamijkan waa la jaan qaada labada daaqadaha iyo Mac OS taas oo mid ka mid ah convertors aad u yar taas oo ka dhigaysa balaadhan oo waayo-aragnimo user iyo enchanting dheeraad ah oo ka soo xagal kasta oo ka dhiga. Ka dib waxaa hanaanka arrintan la xiriira:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html waxaa la socda si aad u hubiso in barnaamijka la soo bixi rakibay oo furay;
2. load DVD button waa in la adkeeyey,
3. saarka waa in la soo xulay sida rabitaan:
4. button diinta ayaa markaas waa in la sii adkeeyey si loo hubiyo in nidaamka la soo gabagabeeyey:
Qeybta 3: Sida loo gubi m2ts in DVD?
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html si interface ugu weyn ee u muuqataa,
2. button gubatay ayaa markaas waa in la sii adkeeyey si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
3. user ayaa ka dibna geli doonaa interface ka gubanaya oo hadda la sahmin doonaa si faahfaahsan:
4. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in faylasha lagu daray adigoo gujinaya ku darto files button oo waxay la damacsan doonaa sida ka muuqata shaxanka hoose:
5. button gubatay ayaa markaas waa in la riixi inuu ku soo bilowdo gubanaya DVD ah la geliyo iyo habka halkan dhamaado si ay aad u fududahay in la isticmaalo Wondershare Video Convertor Ultimate:
The faylasha ku jira qaab m2ts waa mid aad u ballaaran baaxadda iyo waxaa aad u adag in alaabtayda oo dhan ay la wadaagaan kuwa kale online sida waxay u baahan tahay lacagta aad u badan oo ah meel iyo technology daruurta ahaa kama uu yahay mid raqiis ah oo dhan. Ahaanshaha fudud user uu leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan haddii uu go'aansado inuu ka wadaagaan files m2ts online. In Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada waxa aad u adag in user a si loo badbaadiyo macluumaadka ee offline hab ka dibna dadka wax la wadaag oo dhammuna xubnihii macluumaadka la wadaago ee deegaanka online oo uu noqonayaa mid aad u adag haddii qaabka m2ts waa iyagoo loo isticmaalo arrintan la xiriira. Sidoo kale waa mid ka mid ah isticmaalka qaab m2ts convertor in mar nooca file iyo fidinta ayaa la bedelay markaas waa mid aad u fudud u user si ay u ciyaaro in ka badan tirada badan oo ciyaartoyda la heli karo online. Ayaa qaab m2ts waxaa ciyaaray kaliya tiro gaarka ah ee ciyaartoyda iyo sabab la mid ah way adag tahay in la hubiyo in wixii kaloo la sameeyo. Barnaamijyada software editor m2ts yihiin kuwo aad u qaali ah oo inta badan isticmaala marnaba ay doonayaan inay soo iibsadaan, kuwaas oo sida la isticmaalo ay tahay mid aad u yar. Converter A wanaagsan oo sidaas daraaddeed waa inuu xaqiijiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u user iyo qaab oo loo doortay in aan si weyn loo isticmaalaa oo kaliya laakiin qalabka guud iyo terminologies la xiriira ayaa sidoo kale la awoodi karo.
Hel a Free Video Converter aan Watermark
> Resource > Beddelaan > ugu fiican M2TS Converter si loogu badalo M2TS iyo gubi M2TS